Zeziphi iinkampani eziphambili zamayeza eIndiya? | Ukuhamba kwe-Absolut
Zeziphi iinkampani eziphambili zamayeza eIndiya?
Umzi mveliso wamayeza waseIndiya yenye yezona zikhulu emhlabeni. Inkqubo ye- iinkampani ezenza amayeza eIndiya Ngokudibeneyo bangabona bathengisi beziyobisi abenziwe ngobukhulu ehlabathini. Ukongeza, banikezela ngaphezulu kwe-60% yebango lehlabathi lezitofu zokugonya.
Ayisiyiyo loo nto kuphela: e-India kukho phantse i-1.400 yezityalo ezixuba amayeza ezivunyiweyo WHO. Bavelisa malunga ne-60.000 yemveliso yohlobo oluvela kwiindidi zonyango ezingama-60. Ngaphezulu kweenkampani ezixuba amayeza ezingaphezu kwe-3.000 ezisebenzayo kunye nenethiwekhi enamandla yeelabhoratri zemveliso ezingaphezu kwe-10.500, kukhuselekile ukuthi I-India yeyona khemesti inkulu emhlabeni.
Umzi mveliso wamayeza we Indiya Ixabise ngo-2019 kwi-US $ 36.000 yezigidigidi. Amachiza enziwe afana nalawo aveliswe ngumenzi, ane-71% yesabelo sentengiso, enza elona candelo likhulu kwimveliso yalo.
Nalu uluhlu lweenkampani ezixuba amayeza eIndiya. I-10 yethu ephezulu:
1 Ukhathalelo lweCadila
2 Umtsalane Pharma
4 UGqirha Reddys Labs
5 Lupine Ltd.
6 UAurobindo Pharma
7 Ilanga Pharma
Yeyona nkampani inkulu yamayeza eIndiya. Yayisungulwa kwi-1952 nge URamadanhai Patel kwaye isekwe e-Ahmedabad. kwaye iyeyona nkampani inkulu yamayeza eIndiya.
ICadila Healthcare inezityalo ezilishumi zokuvelisa kwilizwe liphela kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe: Navi Mumbai, Ankleshwar, Changodar, Goa, Vatva, Baddi, Dabhasa, Vadodara, Dabhasa nase Patalganga.
Ikwanekomkhulu layo e-Ahmedabad nakwimizi-mveliso yokuvelisa kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe. IPharma Torrent ikhethekileyo ekwenziweni kwamayeza onyango lwenkqubo ye-nervous system (CNS), iingxaki zesisu, iintlungu kunye neyeza lokubulala iintsholongwane.
Ngokukhula okumangalisayo kumashumi eminyaka akutshanje, i-CIPLA, esekwe eMumbai ngo-1935, iye yaba yenye yeenkampani ezixuba amayeza eIndiya.
Ifemi iyaqhubeka amayeza okunyanga izifo ezahlukeneyo ezinje ngoxinzelelo, isifo seswekile, okanye izifo zokuphefumla. Inani elipheleleyo lokuthengisa lijikeleze i-7.000 yezigidi zeerandi ngonyaka (malunga ne-78 yezigidi zeerandi). Unamaziko emveliso asixhenxe apho abasebenzi abangaphezulu kwama-22.000 basebenza.
UGqirha Reddys Labs
Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeenkampani eziphambili zamayeza eIndiya, ngoqikelelo lwelizwe jikelele. Inkampani yasekwa ngo-1984 yi UGqirha Anji Reddy. Ikwikomkhulu leHyderabad kwaye yenza ngaphezulu kwamachiza ali-180 kunye nezinto ezingaphezulu kwama-50 ezisebenzayo zoxubo mayeza.
Zisixhenxe izityalo zemveliso zikaGqirha Reddys eIndiya. Ngaphandle kwelizwe, ifemu ineelebhu eRashiya kwaye ihambisa amayeza e-Belgian inkampani yamayeza i-UCB SA eMzantsi Asia.
Inani layo lokuthengisa lingaphezulu kwezigidi ezingama-5.000 1968 zeerandi ngonyaka. Lupine wazalwa ngo-XNUMX enkosi inyathelo UDesh Bandhu Gupta, ngomnye wabaphandi abadumileyo elizweni. Inkampani ngoku ithengisa iimveliso zayo kumazwe angaphezu kwama-70 kwihlabathi liphela, kubandakanya uMzantsi Afrika, iJapan, i-Australia kunye ne-European Union.
Iinkampani eziPhezulu zoMayeza eIndiya
Isekwe kwi1988, I-Aurobindo Pharma limited ijongene nokwenziwa kunye nokuveliswa kwamachiza enziwe afana nalawo aveliswe ngumenzi kunye nezithako ezisebenzayo. Uneenkalo ezikhethekileyo kwimimandla ethile yonyango: Inkqubo yoMbindi woNyango, i-cardiovascular, antibiotic, i-antiretroviral, i-antiallergic kunye neemveliso zesisu.
Inkampani ithumela iimveliso zayo kumazwe angaphezu kwama-120 kwaye ingeniso engaphezulu kweebhiliyoni ezine zeerandi ngonyaka.
Enye yeenkampani eziphambili zamayeza eIdnia, esekwe ngu UDilip Shanghvi ngo-1983 kummandla waseVapi eGujarat. Ekuqaleni iSun Pharma yayizinikezele ekuveliseni iintlobo ezintlanu zamachiza ezijolise ngqo kunyango lweengxaki zengqondo. Emva kwexesha, inkampani yafumana amayeza Ranbaxy, ukwandisa ikomkhulu layo kunye nokwandisa imveliso yayo.
I-70% yeziyobisi zeSun Pharmaceutical zithengiswa eMelika. Kwiminyaka yakutshanje inkampani iqale ulwandiso olomeleleyo olukhokelele ekuvuleni izityalo kumazwe afana neMexico, Israel okanye iBrazil.
INatovexia Life Sciences Pvt. Ltd. yaziwa njenge Inkampani ekhokelayo kwihlabathi liphela ekwenziweni nasekuthengisweni kwamayeza ahlukeneyo. Udumo lwale nkampani yoxubo mayeza lilele kwelona nqanaba liphezulu leqela lalo leengcali, amaziko alo obugcisa kunye notyalo-mali kwiiprojekthi zophando ezintsha.
Isekwe eBombay, Iilebhu zeAlkem yenye yeenkampani ezixuba amayeza eIndiya. Iimveliso zayo zithengiswa kumazwe angaphezu kwama-40- Amachiza akwizinga eliphezulu aqhelekileyo, izithako ezisebenzayo zoxubo mayeza kunye ne-nutraceuticals. Lilonke, ngaphezu kweempawu ezingama-800 ezigubungela onke amacandelo ezonyango aphambili.
IAlkem iyathengisa kwaye ithengise iimveliso eMelika phantsi kophawu lwentengiso Nyuka. Ngokufanayo, ikhulisa umsebenzi wayo kwezinye iimarike ezinje ngeAustralia, iChile, iPhilippines neKazakhstan, phakathi kwabanye.
Uluhlu lwethu luqukumbela ngo Imbuyekezo IPCA Laboratories Ltd., Inkampani enamava angaphezulu kwamashumi amathandathu amava. Iimveliso zayo zisasazwa kumazwe amalunga ne-120, ngelixa amaziko alo afumene ukunconywa ngabasemagunyeni abalawula iziyobisi kwihlabathi liphela.
Enye yeenjongo eziphambili ze-IPCA kukugcina inqanaba eliphezulu lomgangatho kuzo zonke iimveliso zalo, ukubheja kubungcali kunyango oluthile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Zeziphi iinkampani eziphambili zamayeza eIndiya?
URaju Mahtani sitsho
Ndingathanda ukwazi amagama eLabhoratri eIndiya, aqinisekiswe yi-DIGEMID yasePeru
Phendula ku Raju Mahtani
U-ELIAS TAHAN sitsho
Ndingathanda ukwazi uluhlu lweemveliso zelebhu ukwazi ukuba zinantoni kwaye unakho ukusebenza nazo, sineNdlu yoBumeli eVenezuela, eColombia naseMbindi Merika.
Phendula u-ELIAS TAHAN
Iintaka kwihlathi elinemvula laseAmazon
Iintaba zeAndes eVenezuela